Posted by ZT at 2:19 AM
မယူခင်ကတောင် ဒီလောက်ဆို ယူပြီးရင်
ရီရတယ်...မယူခင်ထဲက ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ မောင့်ကို ချန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မ ရဲ့လုပ်ရပ်မှန်တယ်လို့ ယူဆရမလားဘဲ...
ဒီလောက်လက်တွေ့ကျတဲ့ သူ ဒီလိုခံရမှမှတ်မယ်။
ဝင်းဒိုးရှော့ပင်ထွက်တာတော့ တို့လဲကြိုက်တယ် ။ မဝယ်ပဲ လိုက်ကြည့်ထားပြီး သူများမေးရင် ပြောပြတတ်တယ်။ ခုတော့ အဲလိုတောင် မထွက်ဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျန်တာတွေဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ မင်္ဂလာဆောင်တာ ကားဝယ်တာတော့ တို့လဲ အဲဒီတိုင်းတွေးထားတယ် ဟိဟိ။ တခုကောင်းသွားတာက ၂ ယောက်လုံး အတူတူမို့ တော်ပါသေးရဲ့ နို့မို့ မလက်တွေ့ကြီး ကျန်ခဲ့မယ် ထင်ပါရဲ့။
ဒီလိုအဖြစ်က အပြင်မှာ တကယ်ဘဲရှိပါတယ်။ ကျွန်မထားခဲ့တဲ့ ရည်းစားလဲတကယ် အဲဒီလိုဘဲပြော တတ်တယ်။ ပညာတွေ တတ်ပြီး ဘယ်အရာကိုမှ လေးလေးနက်နက်မရှိ ဘဝကို ခပ်ပေါ့ပေါ့တွက်တဲ့ သူနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရတယ်။
ဟီးဟီး..မှန်လိုက်တာ..မီးချစ် နဲ ့ကိုကိုချစ် အကြောင်းရေးထား သလို ပဲ.. း))
ကိုကိုချစ် က မယူခင်က လက်တွေ့မကျဘူး..
ခုမှလက်တွေ ့တွေ စွတ်ကျနေတယ်.. ယောက်ကျားမာယာ ပေါ့ ဟင်းးးး
အချစ််flow နဲ့cashflow အဲသလိုကြီး ပေါ်တင်ကြီး သွားမရောရဘူး လေဗျား။ ရော်….ခက်ပါ့။ ယောက်ျား မာယာကြီးများ ဘယ်သွားထား ပါလိမ့်။ အ ဟတ် ဟတ်။
ကြောက်စရာကြီး မယူခင်ကတောင် အဲ့သလို ပြောနေတာ ZT အဲ့ဒါ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းမဟုတ်လား သင်ခန်းစာ ယူနော်
မ မှန်တယ် မ မှန်တယ်
အဲဒါနဲ့ကိုဇက်တီကြီးက ကျန်ရစ်ခဲ့ရောပေါ့နော်။ဟုတ်လား? :P
ဘာသာမပြန်ပါဘူး။ ၂ နာရီအတွင်း အပြီး ရေးထားလို့ပါ။ :D
လက်တွေ့ဘဝဆိုတာအဲ့လောက်မလွဲသလို ပိုက်ဆံဆိုတာလဲ တွင်းထဲက ထွက်လာတာမဟုတ်ဖူး
ရိုးသားကြိုးစား ရှာဖွေ ဓနကို အဲ့သလို သုံးဖြစ်လိုက်တော့ နှစ်ယောက်တစ်ဘဝက မစရသေးဖူး ရင်နှီးစရာ က ကုန်ပြီပေါ့
ယူလိုက်တဲ့ငနာလေးတော့ များမကြာခင်မှာ ဟီးဟီးဟီး
ကြွေးဝယ်စရင် ဘဏ်ကပို့လို့ ဗျာများရမယ် ဟားဟားဟား
တို့ကိုZTကြီးတော့ အဲလောက်ကြီး လက်တွေ့ကျမယ်မထင်
ပြုံးပြုံးနဲ့ နောက်ကနေ လိုက်သွားမှာ မြင်ယောင်သေး
ကောင်းမလေးတွေ ရှော့ပင် ထွက်တာကို စိိတ်မရှည်နိုင် ပါဘူး. ကောင်းမလေးတွေ စိတ်ကူးနှင့် လုပ်ချင်တာတွေကို အလိုမလိုက်ပါနဲ့. အကျင့်ပါတယ်
ကျွန်တော် ဈေးကွက် ရှာဖွေသူပါ
အချဉ်ဖမ်းစရာ ဝယ်သူတွေရှိနေတယ် ငဲငဲငဲ
ဟီး ကျွန်တော် ဈေးကွက် ထုတ်လုပ်သူပါ
ပြိုင်ဆိုင် ကြွားဝါ တက်သော ဝယ်သူကို စောင့်နေပါတယ် ( အချဉ်ဖမ်းဖို့)
တိုက်ဆိုင်မှှုတွေ သိပ်များနေတာလား အားလုံးပဲ အဲဒီလိုလားဗျာ....။ တသဝေမတိမ်းပါပဲ...။
ဒီလောက်ကြီးလက်တွေ့ကျတဲ့သူနဲ့ ... ဒီလောက်ကြီး သုံးတာနဲ့ဖြုံးတဲ့သူနဲ့ တွေ့သွားကြတာပေါ့ဗျာ.. လက်တွေ့ကျလွန်းတော့လဲ ပျော်စရာ ရှားနေသပေါ့.. မိန်းကလေးဘက်ကလဲ သုံးတာနဲ့ ဖြုံးတာကို ခွဲခြားမသိရင်တော့ .. စောစောစီးစီး လက်လွတ်လိုက်ကြတာပဲ ကောင်းပါတယ်.. နောက်က အဖြေရသွားသူကတော့ ... ... ရှာပေအုန်းတော့... နှဖူးကချွေး ခြေမကျပြီး နှဖူးပေါ်ပြန်စင်တဲ့အထိ ပေါ့.. ^_^